पेट र छाती जोडिएको जुम्ल्याहा बालिका जन्मियो,स्वास्थ्य अवस्था सामान्य – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > Front News > पेट र छाती जोडिएको जुम्ल्याहा बालिका जन्मियो,स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
पेट र छाती जोडिएको जुम्ल्याहा बालिका जन्मियो,स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
३ मंसिर २०७५, सोमबार ११:४१
काठमाण्डौ -कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कालीकोटकी एक महिलाले पेटदेखि छातीसम्म शरीर जोडिएकी जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिएकी छन् । रास्कोट नगरपालिका– ५ कालीकोटका २८ वर्षीय ललिता बुढाले आइतबार दिउँसो ३ : १५ बजे जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिएकीहुन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट काजमा खटिएका डा. राजीव शाह नेतृत्वमा डा. रवीन खातुङ, डा. महेश पौडेल, शल्यक्रिया कक्षमा रहेकी नर्स विनिता बस्यालसहितको चिकित्सकको संयुक्त प्रयासबाट शल्यक्रिया गरेर जुम्ल्याहा बालिकाको जन्म दिइएको हो । उनीहरुको अवस्था सामान्य रहे पनि खतरामुक्त गर्न एनआइसियुमा राखिएको डा राजीवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आमाको अवस्था सामान्य छ । जुम्ल्याहा बालिकाको कलेजोको भाग टाँसिएको र मुटु पनि जोडिएको हुनसक्ने उनले बताइन् । ‘पेटदेखि छातीसम्मको शरीर जोडिएको शिशु जन्मनु पश्चिम नेपालमा असाधारण र दुर्लभ घटना हो’, डा. शाहले भने, ‘एमआरआइ वा भिडियो एक्स–रे गरेर उनीहरुको थप शल्यक्रिया गर्नु पर्दछ ।’ यद्यपि उनीहरुको शल्यक्रिया सफल हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
ललिताका पति विर्खबहादुर बुढाले उनलाई चार दिनसम्म कालीकोट अस्पतालमा राखेका थिए । अस्पतालले पठाएपछि उनले शनिबार बेलुका प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याएकाह हुन् । बुढाले सात दिनसम्म बेथाले च्यापेकी श्रीमती र बच्चा सकुशल देख्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले शल्यक्रिया गरेर पत्नी ललिता र जुम्ल्याहा बालिका बचाउन सहयोग गर्ने चिकित्सकको टोलीलाई धन्यवाद दिए । ‘एकातिर खुसी छु तर अर्कोतिर आजदेखि चिन्ता पनि थपिएको छ’, बुढाले भने। उनले बालिकाको जीवन बचाउनलाई सरकारसँग सहयाेगकाे अास राखेका छन् ।
डडेल्धुरा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १८पुग्यो,१४ को सनाखत(नामावाली सहित)
पैसा दिने प्रलोभनमा १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत
वाम गठवन्धनबाट बाहिरियो नयाँ शक्ति
“रेडियो सन्देश अवार्ड, सम्मान एवम् पत्रकारिता पुरस्कार समर्पण समारोह-२०७५”बैंककमा सम्पन्न
गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेर वृद्धको मृत्यु
‘विप्लव’ लाई सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब
आफ्नै भाइद्धारा ‘अपहरण’मा परिन् सांसद मल्ल